Ungazikhetha njani ezona Faucets zaseKitshini ziBalaseleyo-IiFaucethi zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Blog / Ungazikhetha njani ezona mpompo zeKhitshi
2020 / 10 / 29 uhleloBlog 4749 0
Iimpompo zekhitshi ziza ngeendlela ezininzi ezonwabisayo kwaye zahlukile kule mihla. Iimpompo ziya kujongeka zimnandi kwikhitshi yesiko lesiqhelo, ngelixa iipompo ziya kugxininisa uyilo lwekhitshi langoku. Ukuze ukwazi ukufumana iipompo ezifanelekileyo okanye iimpompo, kukho izinto ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo ezinje ngohlobo lwezixhobo, kunye nokuqina, ifashoni, inqaku, ubukhulu kunye nokugqiba. Ngapha koko, kuya kufuneka ukuba uwuqwalasele umsebenzi.
Iimpompo eziphambili zekhitshi akufuneki zijongwe nje kakuhle, kodwa kufuneka zibe neempawu ezininzi ezinjengokuqina kunye nokuguquguquka.
Okokuqala, ufuna ukwazi iindlela ezininzi ezahlukeneyo ezikhoyo: iimpompo ezilawulwa zodwa, iimpompo ezibini / eziphathwayo, uyilo lokutsala (ngeempompo ezibini okanye ezibini eziphathwayo), iimpompo ezixhonywe eludongeni, kunye nemibhobho yokuntywila. Iiyunithi ezilawulwayo ezingatshatanga ziyakhawuleza kwaye zilula kuba inelever enye yokusebenza. Kwelinye icala eliphethwe liqukethe ivalve yamanzi ebandayo kunye nevalve yamanzi ashushu. Ezi ntlobo zimbini zinokuza nesitshizi sokutsala, esinokusetyenziselwa ukuhlamba iiveggies okanye ukucoca isinki.
Iimpompo zanamhlanje zenziwe ngobhedu ngokugqitywa okwahlukeneyo kufana nesingxobo segolide kunye ne-enamel. Ibrass ibandakanya ilothe enokubangela ityhefu yelothe eya kuthi ikhokelele kwiingxaki ezininzi zempilo. Ngenxa yoku, bonke abenzi betephu e-US abavumelekanga ukuba babe ngaphezulu kwepesenti ezisibhozo zento kwiifompo zabo zobhedu, njengoko kuchaziwe nguMthetho waManzi okusela aKhuselekileyo. Ukuba unenkxalabo malunga nempilo yakho, unokufuna ukujonga ezinye izinto ezinjengeefompo eziyiceramic kuba i-ceramic ayinazo iikhemikhali ezinokwenzakalisa umzimba wethu.
Gcina ukhumbula, iindlela ezahlukeneyo zeetephu zinemisebenzi eyahlukeneyo. Iifoto zokufaka iifotile ziye zafaka ii-spout ukuvumela indawo eyoneleyo yokubeka iinqanawa ezinje ngeebhasikithi zoluhlu okanye iijagi zamanzi ngaphantsi. Iyunithi yesokethi eludongeni kufuneka ikhethwe nguwe, ukuba ufuna ukubanendawo enkulu.
Unokufumana neepompo zekhitshi ezixhotyiswe ngezinto ezifanelekileyo njengabalawuli betephu kunye nezifudumezi zamanzi. Kodwa ezi zinto zale mihla azifumaneki kwisitayile ngasinye okanye ukugqitywa. Ikhitshi Umvelisi wefeksi Bazinikele ekwenzeni oombhobho kumashumi eminyaka, ngaphandle kweenkulungwane kunye nomgangatho ophezulu. Ungashenxisa indawo yomenzi nangona ivenkile ekufuphi yehardware inokukubonelela ngeepompo ezisemgangathweni.
Ngaphambili :: Ukuqondwa okungcono kweZitayile zeFace yaseKitchen next: Ungayikhetha njani itepu yekhitshi
2021 / 09 / 27 2487
2021 / 09 / 25 2694
2021 / 09 / 25 4567
2021 / 09 / 24 2747
2021 / 09 / 24 2628